Abagqatswa bezopolitiko bazakufumana i $ 2,900 yentengiso yasimahla kwiFreeSpace yeNtlalontle, Inc.
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Abagqatswa bezopolitiko bazakufumana i $ 2,900 yentengiso yasimahla kwiFreeSpace yeNtlalontle, Inc.
IFreeSpace yeNtlalontle ibhengeza ukuba baya kunikela nge- $ 2,900 kwintengiso yasimahla kubo bonke abagqatswa bezopolitiko abazimanya neqonga, njengegalelo elinobubele, nokuba bangayiphi na inxaxheba.
Abagqatswa bezopolitiko bafanelwe lonke ithuba elivelweyo lokuhambisa umyalezo wabo kuluntu ngokubanzi ngaphandle kwemithetho engqongqo kwintengiso yezopolitiko enxulunyaniswa nothungelwano oluqhelekileyo loluntu. I-FreeSpace isebenza ngokumodareyitha enobubele kodwa eqinile, kunye nokumiswa kweakhawunti okunyanzeliswa kulo lonke uhlobo lwamanyala okanye umxholo ongalunganga. Nangona kunjalo, inkampani ibonisa imeko evumayo ngakumbi kunabalingane bayo be-Big Tech xa kufikwa kwintengiso, ngakumbi impilo, amaqela enkolo, imibutho yokurhweba ngabantu, kunye nemikhankaso yezopolitiko.
Abagqatswa ababhengeziweyo abanqwenela ukuthatha inxaxheba kwintengiso yasimahla kwiFreeSpace baya kucelwa ukuba bangenise ikopi yefom yesibhengezo se-FEC ukuze balungele. Abagqatswa ababhengeziweyo baya kuba neprofayile yabo yeFreeSpace kwangoko eqinisekisiweyo bakufumana kunye nokuvunywa kwefom ye-FEC.
"Samkela abagqatswa kuyo yonke imibutho yezopolitiko ukuba basebenzise eli thuba linqabileyo lentengiso yasimahla kwiqonga lethu," utshilo umphathi weFreeSpace, uJon Willis. "Sinethemba lokuba oku kuya kuvumela uluntu olunolwazi olungcono kubagqatswa abahambelana neenqobo zoluntu lwabo."